> Resource > Video > Sida loo Beddelaan Streaming Video in MP3?
Video geeyo A ka dhigan video ah oo la si toos ah u ciyaaro internet ka, ma ka your computer. , Haddaba sidaas daraaddeed waa ciyaari karaa offline haddii aad ka soo dejisan video geeyo si aad PC. Diinta hoorto video in MP3 dhigan tahay in aad ka hoorto video in MP3, iyada oo aan la image laakiin audio Macdan audio.
Waxaad dooran kartaa inaad soo bixi geeyo video iyadoo la isticmaalayo qalab ugu horeysay, ka dibna badalo audio ka hoorto video in MP3 iyadoo la isticmaalayo qalab kale. No, guys! Waxaa aad u adag, soo maaha? Maxaa ka xun, habka soo celiyaa uu keeni karo khasaaraha audio intii lagu Video Streaming in ay MP3 diinta.
Halkan, waxaan la wadaagi doonaa hab fudud oo sare-ool ah si ay kaaga caawiyaan in aad loogu badalo hoorto video in MP3. The geeyo video lagu kalsoonaan karo in MP3 Converter waxaan la qaato waa Streaming Audio Recorder .
Waxaa loogu tala galay si ay u qoraan audio iyo si toos ah u badbaadin ee file MP3 sida video geeyo ka ciyaara dhex kaarka codka your computer ee. Sidaa darteed, waxaad u isticmaali kartaa si ay u qoraan hoorto video in MP3 oo aan wax khasaare ah in audio. Ma xiiseynaya? Fadlan sii.
Tallaabo 1: Ku rakib oo ay maamulaan video hoorto in MP3 Converter
Video Tani geeyo si MP3 Converter waxaa laga heli karaa halkan adigoo gujinaya xiriirka hoose. Ka dib markii download, rakibi oo abuurtaan.
Talaabada 2: Play Video Streaming ah
Raadi iyo ciyaaro video geeyo aad rabto in aad qortid loo siiyaa biraawsarkaaga ah. Si loo hubiyo video geeyo si buuxda loo diiwaan karaa hal MP3 faylka, lahaa inaad si fiican u hubso in geeyo video this habsami leh ka ciyaari kara inta lagu guda jiro duubo. Just-saxaafadeed "hako" si ay u si buuxda u xafidi sida ugu dhakhsaha badan video ah uu bilaabo inuu u ciyaaro.
Tallaabo 3: Ka billow si loogu badalo video hoorto in MP3
Ka dib waxa ay ku dhamaato 100% dhuleed, guji "Record" badhanka ee geeska bidix ee sare ee interface ugu weyn this app ee. Markaas riix "ciyaaro" badhanka inuu u ciyaaro video geeyo ah. Marka ciyaareed ee video geeyo ay ka badan tahay, file maqal ah in MP3 si toos ah ay abuuri doonaan maktabadda.
Waxaa la sameeyey! Haddii aad isweydiin file MP3 la badbaadiyey aad kombuutarka, in aad xaq u-riixi kartaa file in uu doorto "Open ee folder" doorasho.
Waa sahlan tahay, soo maaha? Si loogu badalo hoorto video in MP3 sidan, uma baahnid inaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo video geeyo ugu horeysay. Waxaa idinka badbaadin doonaa waqti badan iyo lacag. Dabcan, app this sidoo kale laguu suurogeliyo in aad soo saaro audio ka video kaydsan aad PC in MP3 la wanaagsan oo tayo leh.
Tip dheeraad ah: Ka dib markii ay soo degsado oo dhan MP3 files ka hoorto video, waxaad isticmaali kartaa Lugood in uu abaabulo heesaha. Laakiin heesaha waa in ay leeyihiin macluumaad dhamaystiran. Halkan waa aalad lagula talinayaa in ay ka caawiyaan. Wondershare TidyMyMusic u Mac wuxuu diyaariyaa gabayadii mislabeled maktabadda Lugood iyo farshaxanka xitaa downloads album iyo lyrics in Cudarada in MP3 faylasha. Waa maxay dheeraad ah, waxa ay kaa caawin karaan meesha laga saaro labalaabka heeso. Mid ka mid Download in ay isku day ah. Waxaad tahay qeybiso jeclahay.
Waxaad kala soo bixi karaan barnaamijkan hoos ku qoran: